We She Me: ပုစွန် Recipe များ
ရွှန်းလဲ့ - 4/15/10, 10:52 PM
စမ်းကြည့်အုံးမယ် ရုံးပိတ်ရက်ကျရင်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... :)
Phyo Evergreen - 4/15/10, 10:53 PM
ပုဇွန်ဆိုရင်တော့ အစိမ်းမကြိုက် ဘူးဗျ..။ အနံ့မရှိဘဲ.ဟင်းခတ်များများနဲ့ တူးရင်တူးနေပစေ ကျက်နေအောင်ချက်ထားမှကြိုက်တာဗျို့..။
ပုဇွန်ကို သရက်သီးသနပ်နဲ့ မဆလာနဲ့ အရည်စပ်စပ်ချက်တာကိုအကြိုက်ဆုံးဘဲ. ပုဇွန်ကဏန်းဟင်းခေါ်လားမသိဘူး...။
တန်ခူး - 4/15/10, 11:24 PM
ပုဇွန်သုတ်လေးက ထမင်းမြိန်မယ့် ပုံလေးနော်… ကိုအန်ဒီတို့ များ ရှေ့ သွားနောက်လိုက်ညီပါ့… ပုဇွန်ကို တခါတလေ ဘယ်လို လုပ်စားရမှန်းမသိတော့ ခုလို နည်းအသစ်လေးတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ
မိုးဦးစံပယ် - 4/16/10, 1:52 AM
ကိုအန်ဒီ့ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီးမှ "စပ်စီးစိမ်းလွှင့်" ချက်စားဖို့ သတိရသွားပြီ။ စပ်စီးစိမ်းလွှန့် နဲ့ ပဲသီးပြုတ်၊ ဟင်းရွက်ပြုတ်နဲ့ကပ်စားလိုက်ရရင်..တွေးရုံနဲ့ လျှာရည်လည်သွားပြီ။
yanmyo - 4/16/10, 1:53 PM
Myitchaythu - 4/16/10, 3:33 PM
Anonymous - 4/16/10, 11:45 PM
စပ်ဆီးစိမ်းလွှင့်နဲ့ ပျဉ်းတော်သိန်ရွက်နဲ့ ကပ်စားရင် ကောင်းမှကောင်း...
ချစ်ကြည်အေး - 4/17/10, 2:54 PM
ပထမဆုံးဟင်းခွက်လေးကို စိတ်ဝင်စားတယ် ကိုအန်ဒီရေ...ကိုယ်တိုင်ချက်လေ့ရှိတယ် ဆိုတော့ အမျိုးသမီးကံ ကောင်းတာပေါ့၊ ချက်ကြည့်ပါအုံးမယ်...:)
လသာည - 4/18/10, 12:45 PM
ပြည်ကြီးငါးနဲ့ ပုဇွန်တွဲချက်တာလေးကို အရမ်းကို သဘောကျတယ်.. စားကောင်းမယ့်ပုံလေးပဲ..။
ပုဇွန်အစိမ်းစားတဲ့ပွဲလေးလည်း စားချင်စရာပဲ.။. ဂျပန်လူမျိုးတွေက ငါးအစိမ်း၊ ပုဇွန်အစိမ်းကို စားကြတော့ ဒီရောက်တော့ စမ်းစားဖြစ်တယ်။ စားရင်းက ကြိုက်သွားတာ.. အခုဆို တစ်လတစ်ခါကို စားချင်နေတယ်..။
ပုံတွေကြည့်ပြီး ဗိုက်ဆာသွားတယ်း))
Anonymous - 4/19/10, 1:27 PM
how to call ငါးဖယ် in English?
I want to buy it from market.
Anonymous - 4/23/10, 12:38 AM
Nga Phe is called "Featherback Fish".
Anonymous - 4/23/10, 12:52 PM
အောက်က လင့်မှာ မြန်မာငါးတွေ အကြောင်း ရေးထားတယ်
Andy Myint - 4/23/10, 1:41 PM
Thanks.. this is useful for us too
ဂျာမုန်းဒန် - 4/28/10, 5:57 AM